Par Taratra sur 20/03/2019
Nahazo fitaovana hiadiana amin’ny asan-dahalo, araka ny fampanantenana avy amin’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ireo mpitandro filaminana miasa any Betroka. Fitaovana nahitana moto miisa 77 sy drones miisa fito. Tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asan’ny filoham-pirenena sy ny avy amin’ny PNUD izay mifandraikitra indrindra amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahelamana any amin’ny faritra mena amin’ny asan-dahalo izao fanolorana fitaovana ny mpitandro filaminana izao.
Vato tsy ara-dalàna milanja 5 taonina no tratran’ny polisy tany Ihosy, ny herinandro lasa teo. Araka ny fanazavan’ny polisy, fiara avy any Bekily hihazo aty an-dRenivohitra ity nitondra vato tsy ara-dalàna ity. Nataon’ireo olona nitondra azy tao ambanin’ny potika bidao efa simba sy plastika efa tsy miasa intsony ireto vatobe tsy ara-dalàna ireto. Nandritra ny sakana nataon’ny polisy tao Ihosy no nahatrarana ilay fiarabe nitondra izany.
Niharan’ny fanafihan-jiolahy ny tranombarotra iray ao Besalampy, omaly maraina. Dahalo ampolony maro miaraka amin’ny basy vita gasy no tompon’antoka tamin’ity fanafihana ity. lasan’ireo malaso tamin’izany ny vola mitentina 2 tapitrisa Ar tao an-trano niaraka tamin’ny vola tao anaty telefaonina finday mitentina 4 500 000 Ar sy tao anaty telefaonina iray hafa mitentina 8 tapitrisa Ar. Lasa nitsoaka ireo malaso taorian’izay.